Secteur aurifère : Les exploitants réclament un prix de référence de l’or - ewa.mg
News - Secteur aurifère : Les exploitants réclament un prix de référence de l’or
L’article Secteur aurifère : Les exploitants réclament un prix de référence de l’or est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Secteur aurifère : Les exploitants réclament un prix de référence de l’or a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Pilo kely #4467 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4467 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Fitsaboana ny covid-19 :: Fiainana vehivavy mpitsabo iray nandritra ny efa-bolana
Iray tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana niatrika voalohany tamin’ny fahatongavan’ny valanaretina Covid-19, teto Madagasikara, ny dokotera Rakotonandrasana Brigitte Irène. Lohalaharana tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana nahetsika hitondra ny traikefany eo amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina ity mpitsabo eo anivon’ny sampan-draharaha misahana ny fahasalaman’ny isam-pianakaviana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ity. Mitantara ny fizotran’ny fanaraha-maso ny toe-pahasalaman’ireo mpandeha an-jatony tamin’ireo sidina faramparany niditra teto Madagasikara, ny 17 marsa hatramin’ny 19 marsa 2020, ny dokotera Brigitte. « Tamin’ireo daty ireo no efa nanahiako mafy hoe tsy maintsy ho tonga eto amintsika io valanaretina io satria misy ireo nody tany an-tranony ary nisy koa no nihiboka tany amin’ny trano fandraisambahiny », hoy izy. Tafiditra tao anatin’ny ekipa nivezivezy nizaha matetika ny fivoaran’ny toe-pahasalaman’ireo mpandeha tonga teto Madagasikara rahateo ny tenany, taorian’ny 20 marsa 2020. Tahotra « Iray andro taorian’izany no nisian’ny olona voalohany voamarina ho nitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 teto amintsika. Olona nandalo teto amiko sy narahina maso akaiky ny iray tamin’izy ireo. Io no andro nanamarika ahy indrindra satria natahotra aho. Aretina vaovao mbola tsy fantatra tsinona ny Covid-19 tamin’izany fotoana izany », araka ny fitantaran’ity mpitsabo ity. « Tena sarotra, ny niainana ny ady tamin’ny valanaretina, tany am-piandohana, noho ny mbola fifampitadiavana tamin’ireo fitaovana fiarovantena », hoy izy. Rehefa nitsangana ny Ivon-toerana voalohany nisahana ny ady tamin’ny valanaretina Covid-19 teny amin’ny CCI Ivato, no voafantina ho isan’ireo mpitsabo nitily sy nanara-maso an’ireo olona nahiana ho mitondra ny tsimok’aretina Coronavirus ny dokotera Brigitte. Tery dia tery ny fandaharam-potoanany tao anatin’ny iray andro, tamin’izany fotoana izany, satria matetika izy no miala maraina ao an-tokantranony ary tsy tafody raha tsy amin’ny 11 ora alina. « Henjana ny asa. Mandany ora maro ny fitadiavana ny tranon’ireo olona tokony hatao fitiliana sy arahimaso. Voatery nisintaka kely tamin’ny fianakaviako nandritra ny fotoana lavalava mihitsy aho ho fitandremana ny fahasalamanay mianakavy. Tsy afaka nitoka-monina ela anefa aho rehefa nantsoina hanohy ny asa noho ny firongatry ny valanaretina », araka ny fitantaran’ity mpitsabo ity. Niato kely Rakotonandrasana Brigitte Irène, taorian’ny fijoroan’ny Foibe fibaikoana ny ady amin’ny Covid-19 (CCO), teny Ivato. Tsy ela kosa dia niverina tamin’ny ady ity renim-pianakaviana manan-janaka mianadahy ity, satria voaantso tamin’ny fandraisana an’ireo olona marary na ireo ahiana ho mitondra ny tsimok’aretina, tetsy amin’ny Tanàna Voara, indray ny tenany. Marary efa maty Raha ny filazany dia mifandimby miasa 24 ora amin’ny 24 ora amin’ny fandraisana marary izy ireo, ka indraindray no tsy afaka misakafo mihitsy noho ny fahamaroan’ny olona. Misy fotoana no amin’ny 2 ora maraina vao mitsahatra ny fizahana marary. « Tena nahaontsa ahy ny trangana fahafatesana iray teo aminay. Tsy nialana nenina akory ilay olona rehefa novonjen’ny havany nentina taty satria efa tsy nisy aina intsony ilay marary no nigadona teto », hoy indray ny fitantaran’ity renim-pianakaviana ity ny zava-nisy efa nandalo teo ambany masony, tao anatin’izay efa-bolana izay. Eo ny harerahana amin’ny fandraisana an-tanana an’ireo marary, fa tsy maintsy tsimbinina ihany koa ny fiarovan-tena mba tsy hifindran’ny tsimok’aretin’ny Covid-19. Misy ireo mpitsabo mitaraina noho io olana farany io. Toy izany koa ny fiaretana any amin’ny hopitaly, tahaka ny tsy fisian’ny efitra manokana fatoriana, ka indraindray no eo amin’ny toerana fandraisana olona no ilafihan-dry zareo. Nambaran’ny dokotera Brigitte fa izy ireo ihany no mitondra ny firakotra avy any an-tranony. Tsy mihinana, afatsy izay sakafo karakarainy, dokotera Brigitte ho fitandremana ny fahasalamany. Amin’ny 3 ora maraina izy no mifoha mahandro ny sakafony mialoha ny hialany ao antranony rehefa hiandry raharaha eny Andohatapenaka. Tsy mampilavo lefona an’ity mpitsabo ity sy ny ankamaroan’ireo namany misehatra amin’ny tontolon’ny fitsaboana izany rehetra izany. « Efa zatra miady amin’ny valanaretina aho, toy ny tamin’ny fiparitahan’ny kolera, ny pesta ary ny kitrotro. Isaorana an’ Andriamanitra fa mbola salama tsara aho hatramin’izao. Ady tsy maintsy atao izao ary adidy tsy maintsy hiantsorohana », hoy izy. L’article Fitsaboana ny covid-19 :: Fiainana vehivavy mpitsabo iray nandritra ny efa-bolana est apparu en premier sur AoRaha.
FLM Vangaindrano: ampidirina Cnaps ny katekista rehetra
Natao tany amin’ny fiangonana Loterana Malagasy (FLM) Ambohijatovo Vangaindrano, ny herinandro lasa teo ny fiofanana mikasika ny fiahiana sosialy, araka ny fiaraha-miasa amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Anisan’ny tanjona ny hampidirana ao anatin’ny CNaPS ny katekista maherin’ny 1.000 ao amin’ny fiangonana FLM synodam-paritany Atsinanana.Nampahafantarina ny mpiofana ny tombontsoa omen’ny CNaPS, toy ny fanampiana amin’ny fiterahana, ny fampiakarana ny volan-jaza ho 6.000 Ar raha 5.000 Ar teo aloha, ny vola omena raha sendra tra-doza am-perinasa, ny fisotroan-dronono, sns.Nilaza ny talen’ny Fitantantanana CNaPS, Rakotomila, fa “ilaina amin’ny fitsinjovana ny sedram-piainana samihafa ny fiahiana sosialy, toy ny fiterahana, ny marary, ny fisotroan-dronono, sns. Koa, mila an’izany koa ny mpiasam-piangonana, toy ireo katekista, ohatra”.Nentanin’ny CNaPS koa ny mpampiasa amin’ny sehatra tsy miankina, hitsinjo ny fiahiana sosialy ny mpiasa, toy ireo misehatra amin’ny fikirakirana ny letisia, ny jirofo, ny kafe, ny kakao, sns.Njaka A. L’article FLM Vangaindrano: ampidirina Cnaps ny katekista rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Nanaiky ny fangatahan’i Se­negaly ny eo anivon’ny Komity iraisam-pirenena Olympika, ny amin’ny tokony hanemorana ny lalao olympika ho an’ny tanora, kasaina hatao ny 22 oktobra hatramin’ny 9 novambra 2022 any Dakar, Senegaly. Mano­loana ny fanambaran’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach, fa hahemotra efa-taona ity lalao ity, ka amin’ny taona 2026 ny hanatanterahana izany. Noha­mafisiny, efa nifandinihana nandritra ny fihaonan’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny CIO izao fanapahan-kevitra izao. Noho ny antony ara-pahasalamana sy ny krizy aterak’izany no tena anton’ny nangatahan’ny filoha senegaley, Macky Sall, ny fanemorana. Fanemorana ha­hafahan’ny CIO, ny Komity na­sionaly ary ny federasiona iraisam-pirenena, mampitombo ny ezaka hanomanana ity lalao olympika ho an’ny tanora ity. To­raka izany koa ny firenena senegaley, afaka manatsara ny fandraisana ny fifaninanana. Tsiahivina fa nankatoavina, omaly, ity fanemorana ny lalao olympika ho an’ny tanora ity, nifaneken’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach sy ny filoha senegaley, Macky Salle. Hohama­fisina, anio zoma 17 jolay, mandritra ny fivorian’ny komity iraisam-pirenena Olympika kosa izany fanapahan-kevitra izany, araka ny loharanom-baovao.Mi.RazL’article CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora a été récupéré chez Newsmada.